အလှအပ – Media9
ဆယ်လီ အမေးအဖြေ အလှအပ
Hydrium Collection Product Laugh Event ပွဲ
[Unicode] ဒီဇင်ဘာလ(၈)ရက်နေ့က Juction Square ရှိ Promotion Area တွင်LIBRAYGN COMPANY LIMITED မှ Korea နိုင်ငံရှိ COSRXINC. မှ Cosrx skincare & Cosmetics ရဲ့Hydrium Collection Product Laugh Event ပွဲကို ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။ [Zawgyi] ဒီဇင္ဘာလ(၈)ရက္ေန႕က Juction Square ရွိ Promotion Area တြင္LIBRAYGN COMPANY LIMITED မှ Korea နိုင္ငံရွိ COSRXINC. မှ Cosrx skincare & Cosmetics ရဲ႕ ့Hydrium Collection Product Laugh Event ပြဲကို က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။
ဆယ်လီ ဗြီဒီယို အမေးအဖြေ အလှအပ
ဝိတ်ကျစေမည့် နည်းလမ်းကောင်းတွေကို မျှဝေပေးလိုက်တဲ့ အကယ်ဒမီချောရတနာ”
[Unicode] ဝိတ်ကျစေမည့် နည်းလမ်းကောင်းတွေကို မျှဝေပေးလိုက်တဲ့ အကယ်ဒမီချောရတနာ” [Zawgyi] ၀ိတ္က်ေစမည့္ နည္းလမ္းေကာင္းေတြကို မွ်ေ၀ေပးလိုက္တဲ့ အကယ္ဒမီေခ်ာရတနာ”
[Unicode] အိမ်ထောင်ပြုဖြစ်မယ် ၊ မပြုဖြစ်ဘူးဆိုတာ ကိုယ်ကိုတိုင်တောင် မသိဘူးလို့ ပြောလိုက်တဲ့ နဒီဝင့်နိုင် [Zawgyi] အိမ္ေထာင္ျပဳျဖစ္မယ္ ၊ မျပဳျဖစ္ဘူးဆိုတာ ကိုယ္ကိုတိုင္ေတာင္ မသိဘူးလို႔ ေျပာလိုက္တဲ့ နဒီဝင့္ႏိုင္
ခေတ်ရေစီး ဆယ်လီ ဖက်ရှင် ဗြီဒီယို ရုပ်ရှင် အနုပညာ အလှအပ
ရေချိုးရင် ဘယ်သူမှ အင်္ကျီဝတ်ပြီး မချိုးဘူးဆိုတဲ့ Thin Zar Wint Kyaw
[Unicode] ရေချိုးရင် ဘယ်သူမှ အင်္ကျီဝတ်ပြီး မချိုးဘူးဆိုတဲ့ သင်ဇာဝင့်ကျော် [Zawgyi] ရေခိုးရင် ဘယ်သူမွ အက်ၤီဝတ်ပြီး မခိုးဘူးဆိုတဲ့ သင္ဇာဝင့်ကေ်ာ်
ဆယ်လီ ဖက်ရှင် ရုပ်ရှင် အနုပညာ အလှအပ
[Unicode] ဖွေးအတွက်လည်းအကြိုက်ဆုံးပန်းကနှင်းဆီပန်းပါ။မိန်းကလေးတစ်ယောက်ကနှင်းဆီပန်းလေးလိုပဲလှနေဖို့လိုတယ်။ [Zawgyi] ေဖြးအတြက္လည္းအၾကိဳက္ဆံုးပန္းကႏွင္းဆီပန္းပါ။မိန္းကေလးတစ္ေယာက္ကႏွင္းဆီပန္းေလးလိုပဲလွေနဖို႔လိုတယ္။
ဆယ်လီ ဖက်ရှင် ဗြီဒီယို ရုပ်ရှင် လူမှုဘဝ အနုပညာ အလှအပ
[Unicode] ရေမွှေးကိုဘယ်လိုစွဲစွဲမြဲမြဲသုံးဖြစ်လဲဆိုတာပြောပြခဲ့တဲ့ အိန္ဒြာကျော်ဇင် ကိုယ်ဘယ်သွားသွားအမြဲတမ်းအိပ်ဆောင်ရေမွှေးလေးအမြဲထည့်တယ်။ [Zawgyi] ေရေမြွးကိုဘယ္လိုစြဲစြဲျမဲျမဲသံုးျဖစ္လဲဆိုတာေျပာျပခဲ့တဲ့ အိျႏၵာေက်ာ္ဇင္ ကိုယ္ဘယ္သြားသြားအျမဲတမ္းအိပ္ေဆာင္ေရေမြွးေလးအျမဲထည့္တယ္။
[Unicode] Bella Perfume အသစ် မိတ်ဆက်ပွဲ မှာတွေ့ရတဲ့ စိုးမြတ်သူဇာ
မိန်းကလေးတစ်ယောက်ကလှလည်းလှနေမယ်မွှေးလည်းမွှေးနေမယ်ဆိုပိုကောင်းတာပေါ့။ကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကြသုံးကြတယ်။သုံးကြည့်ပြီးမှသူများကိုပြန်ပြောလို့ရမှာလေဒါကတော့ကောင်းတယ်ဒါကတော့မကောင်းဘူးဆိုပြီးတော့…… [Zawgyi] မိန္းကေလးတစ္ေယာက္ကလွလည္းလွေနမယ္ေမြွးလည္းေမွြးေနမယ္ဆိုပိုေကာင္းတာေပါ့။ကိုယ္တိုင္ကိုယ္ၾကသံုးျကတယ္။သံုးၾကည့္ျပီးမွသူမ်ားကိုျပန္ေျပာလို့ရမွာေလဒါကေတာ့ေကာင္းတယ္ဒါကေတာ့မေကာင္းဘူးဆိုျပီးေတာ့……